muxuu yahay farqiga u dhaxeeya dowlad dhiska iyo ummad dhiska! - Ahmed Abdihadi
Waxaa jira farqi u dhaxeeya dowlad dhis iyo ummad dhis. Dowlad dhisku waa yagleelidda iyo xajinta ha’yadaha maamulka guud, kuwa sharci dajinta, howlfulinta, garsooka, booliska, ciidanka iyo wixii lamid ah. Qaybtan in la dhiso way sahlantahay oo waa arrin farsmo ahaan loo qaban karo in ciidan la dhiso, gole shacab la dhiso, mushaar la bixiyo, madaxweyne la doorto, mushaar la bixiyo iyo arrimaha la xiriira.Markii dowlad la dhiso waxaa loo baahanyahay in la hubiyo in sharcigii iyo kala danbayntii socoto, mushaarkii la bixiyo, meelihii dalka laga soo galayay la ilaaliyo iyo in dalka laga ilaaliyo in ay ka dhex dhashaan kooxo abaabulan oo awood ciidan iyo mid dhaqaale oo aan sharciyaysnayn haysta; Waxaan ka wadaa wa in aysan cid kale hab abaabulan oo sharciga ka baxsan wax ku dhibaatayn karin.Dhismaha dowladnimada Soomaaliya, gaar ahaan 2000 kaddib si gaabis ah ayay ku socotaa. Qaybta labaad oo ah ummad dhiska waxay u muuqtaa in aysan wali dalka ka hanaqaadin.
Ummad dhisku waa in la abuuraa dareen wadareed, hayb wadareed, taariikh wadareed iyo wax dadka dhan isku hayn kara. Walow si dabiici ah ay Soomalidu diin, af, iyo dhaqan wadaag u tahay, haddana soomaalidu waxay u dhisantahay qaab qabiil. Bulshooyinka qaabka qabiilka u dhisan caadi ahaan waxay bulshooyinka adduunka kaga jiraan meelaha ugu hooseeya. Maxaa yeelay, qaab dhismeedka bulsho ee haybta qabiilka ku dhisan ayaa ka markhaati kacaya in horumarka dhaqaale, fikir, tiknooliji iyo cilmi uu hooseeyo.
Taageerida Soomaaliya la siiyo waa mid qayb ka ah dhismaha dowaldda iyo hay’adaheeda laakiin ma ah mid buslho dhis. Sababtu waxay tahay dowladda ayaa shaqooyinka laga rabo ay kamid tahay ummad dhis.
Sidoo kale, ummad dhiska waxaa ka qaybqaata, dadka indheeragadka ah ( intellecutals) fayloosoofyada, qoraayaasha, suugaanlayda, macallimiinta, culimada iyo dadka wax laga dhagaysto.Haddaba, arrimaha aan si wadajir ah uga qaybqaadan karno waxaa kamid ah dad dhiska iyo abuuridda hayb iyo dareen guud oo mujtamac dhan u dhaxeeya.